Askar Ka Tirsan Qaramada Midoobe Oo Lagu Dilay Maali. – Calamada.com
Askar Ka Tirsan Qaramada Midoobe Oo Lagu Dilay Maali.
calamada May 30, 2016 2 min read
War kasoo baxay Gaalada Qaramada Midoobay ayaa waxaa lagu sheegay in weerar kamiin ah oo ka dhacay Dalka Maali in lagu dilay Shan Askari oo ka tirsan Ciidamadooda ku sugan dalkaasi, iyadoona weerarkaasi ay ku dhaawacmeen tiro kale oo Askar ah.
Sida lagu sheegay Bayaankaasi, weerarka waxa uu dhacay 11:00 fiidnimo ee habeenimadii Axadda, iyadoona la beegsaday kolonyo kolonyo Ciidamo oo marayay Mandiqadda lagu magacaabo Mobti oo qiyaastii 30 km galbeedka kaga beegan magaalada lagu magacaabo Seefaari ee galbeedka Dalka Maali.
Illaa iyo hadda si rasmi ah looma sheegin Waddamada ay kasoo kala jeedaan Askartaasi lagu laayay weerarka ka dhacay duleedka magaalada Seefaari, laakiin ilo wareed ka tirsan Booliiska Wadanka Maali ayaa Warbaahinta u sheegay in Ciidamada la weeraray ay kasoo jeedaan Wadanka Togo ee kuyaalla galbeedka Qaaradda Afrika.
Tani waxaa lagu sheegay inay tahay markii ugu horreysay ee weerar ka dhaca bartamaha Wadanka Maali lagu laayo Askar ka tirsan Gaalada Qaramada Midoobay, howl-gal kan la mid ah oo maalintii Jimcihii ka dhacay Waqooyiga Wadanka ayaa waxaa lagu dilay Shan Askari oo ka tirsanaa Gaalada Qaramada Midoobay, kadib markii ay gaari ay la socdeen ay ku qaraxday Miino loo dhigay Waddada dhinaceeda.
Todobaadkii lasoo dhaafnayna, Shan Askari oo u dhashay Dalka Chad ayaa ku dhintay weerar ka dhacay deegaan kuyaalla Waqooyi bari ee Dalkaasi.
Sanadkii 2012-kii ayaa gobollada Waqooyi ee Dalka Maali waxay isku badaleen Saldhig weyn oo ay isku uruursadaan Jamacaatka Jihaadiga ah ee ka dagaallama Wadamada kuyaalla galbeedka Qaaradda Afrika, iyadoona Mujaahidiintu ay maamullo islaami ah ka dhiseen gobollladaasi, hase yeehee Dowladda Saliibiyada ee Faransiiska ayaa horraantii Sannadkii 2013-kii waxay dhulkaasi ku qaadday duullaan Shareeco la dirir ah, kaasi oo ay ku gacan siinayaan dhowr dowladood oo Afrikaan ah.
Previous: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 23-08-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 23-08-1437 Hijri.